Sonke Siyafuna elikuThixo — UHAMBO LEE
ngunotshe. Akuyomfuneko ukumelana neendlela, oothixo bobuxoki, kunye neendlela self-opholileyo. Akunyanzelekanga ukuba kubekho. Kuba nkqu phakathi iinkathazo singafumana yonke into esiyifunayo kuThixo.
Ngoku ndiyazi siva amaKristu ukuthi lonke ixesha ukuba uThixo ngokwaneleyo, ukuba uThixo zonke kufuneka, kodwa akusoloko uziva lokwenene. Yintoni ngokwenene kuthetha? Siphila kwihlabathi bewile, kunye nemiba ezinkulu. Ngoko uThixo ukuhlangabezana njani zonke iintswelo zethu? Ingaba ijongeka kanjani, kunokwenzeka, nakuba yonke into elikho- abasingqongileyo?
Olu hlobo yembandezelo kubandezeleka akufanelekanga langaphandle uThixo okanye iLizwi laKhe. Sayijonga kwiNdumiso ukusuka kwiveki yokugqibela yaye siza kubona kwakhona kule veki kwiNdumiso elandelayo kakhulu, isahluko 142. UDavide wabhala kule Ndumiso kwakunye. Kwaye into siza kubona lo mthandazo zikaDavide ukukhathazwa, ukuzenzela, indoda lithemba bedanduluka uncedo.
Phambi kokuba sifunde itekisi nangona, Ndifuna ukunika imvelaphi. Sibona ibali lobomi uDavide encwadini 1 Samuel.
UDavide ngomnye madoda kakuhle eyaziwa kwimbali zehlabathi. Nguye mhlawumbi idumileyo ngokoyiswa yakhe Scrappy likaGoliyati. Yena imvakalozwi waphosa nje ematyeni kuye waza slayed kuye. Xa uDavide wenza ukuba, USawule ukumkani. Kodwa ke abantu bakwaSirayeli baqalisa wayeyoliswa kakhulu nguDavide. Bada kuculwa iingoma ngendlela emangalisayo yena, ngokuthelekisa ukuba uSawule. Yena ethandwa ngaphezu ukumkani, kwaye ukumkani akazange ayithande loo nto. Ngoko nangona intsikelelo ukumkani uSawule phambi kokuba ebulele uGoliyati, ngoku uSawule wabona uDavide ndilutshaba lwakhe. Kwaye waqalisa ukwenza konke okusemandleni ukuze bambulale. Ngoko xa uDavide ubhala kule Ndumiso, nguye u baleka. Yena ngeqhawe imfazwe ngubani ulwenze into bentshontsho. Ukumkani wenza ukufa kaDavide kwinombolo enye kuluhlu yakhe ephambili. Yinto noDavide ukumkani kunye nomkhosi wakhe wonke.
Kwaye apha ukuze kwiNdumiso 142 sifumana kuDavide, izimela emqolombeni. Nto ayoyika- ubomi bakhe, kwaye ke kuloo ekubandezelekeni yadanduluka uThixo.
Ndiyazibika kuNdikhoyo; Ndiya kuphakamisa ilizwi lam kuNdikhoyo inceba. Ndiphalaza inkalazo yam phambi kwakhe; phambi kwakhe Ndixela imbandezelo yam. Xa umoya wam utyhafe ngaphakathi kwam, nguwe abayaziyo indlela yam. Xa umendo apho ndihamba amadoda bandiqhushekele ngumgibe kum. Khangela ukuba ngasekunene kwam ubone;akukho namnye ochaphazelekayo kum. Andinamntu yokusabela;Akukho uwukhathaleleyo umphefumlo wam. Ndiyazibika kuwe, Nkosi; Ndithi, "Wena yokusabela kwam,Isabelo sam ezweni labahleliyo. "Kubazele indlebe ukuhlahlamba kwam,Ngokuba ndiswele kakhulu; ndihlangule abandisukelayo,ngokuba bebomelele kunam. Undikhulule entolongweni yam, ukuze kubulela kwigama lakho. Aya kwandula ke amalungisa ndawonye ngam ngenxa yokulunga kwakho kum. (iNdumiso 142, yesiXhosa yowe)
Siza kuhamba le tekisi. Kwaye uza ukucinga izinto ezithile malunga ezine sifunda ngoThixo kulo mthandazo kaDavide. Kwaye njengoko sihamba kuyo, siza kubona ukuba ngamaxesha engxingongo amanwele, sinako yonke into uThixo sifumana. Into yokuqala sibona ukuba uThixo umhlobo wethu ngamaxesha engxingongo.
mna. UThixo Mhlobo Wethu ngamaxesha eenkathazo
i. uThixo Uyakhathala
Indlela uDavide ethandaza nasekubhaleni sisekelwe phezu kwenkolelo yokuba uThixo uyayiphulaphula. Kuthatha ukuba inobudlelwane kunye noThixo baze okunene uThixo usikhathalele kwenzekantoni ngobomi bakhe. Yinto intle ephawulekayo xa ucinga ngayo. UThixo iphela usikhathalele ngale sisibhadu umalusi. Basenokuyithandabuza basenokucinga ukuba uThixo onenyameko ngeengxaki zethu akunamsebenzi kangako okanye wenze kakhulu umahluko. Ngubani ofuna umhlobo ongabonakaliyo, xa yonke ebomini bakho sisiphithiphithi? Kodwa Ndingathanda ayililo kakhulu. Isibakala sokuba uThixo umhlobo, ukuba usikhathalele, yenza wonke umahluko ehlabathini. Nokuba ngaba okanye umntu okukhathaleleyo malunga nemeko yakho kuyitshintsha indlela xa umxelela nabo ngako oko.
Umzekelo, oko kwakuza kwenzeka xa cable wam waphuma, kwaye nokuba sibize inkampani yam USB Ndambiza wam umniki Internet. Kaloku mna abanokukufowunela ukubaxelela yonke imiba zam iintambo zam. Ndiya uzikhumbuze indlela Ndiye ibe umthengi othembekileyo, kwaye kubethelela indlela becaphuka mna kule nkonzo emanyumnyezi. Kodwa ngenxa enokuba ndabizayo inani engalunganga, ba khathali. Yaye akuyi ukuzama ukwenza into malunga naloo nto. Eneneni mna diyitshekitshe ke andikhathali nokuba endidanduluka inani ekunene, kwaye zange senze nto ngaloo nto, kodwa u fumana oko ndikutshoyo. Oku kubalulekile ukuba okanye hayi umntu okukhathaleleyo.
Ngoku ndifuna ukuba ucinge bekuya kuba njani ukuba uThixo akazange kusibekela iingxaki zethu. Siya akhale kuThixo imini yonke, kodwa kwakungayi kwenza nawuphi na umahluko konke konke. Cela uDavide ukuba kubalulekile ukuba uThixo usikhathalele. Jonga kwakhona kwivesi enye.
Ndiyazibika kuNdikhoyo; Ndiya kuphakamisa ilizwi lam kuNdikhoyo inceba. Ndiphalaza inkalazo yam phambi kwakhe; phambi kwakhe Ndixela imbandezelo yam.
Lo mntu usengozini ekhawulezileyo. ubomi bakhe esichengeni. Loo nto ifana nguye kwisakhiwo evuthayo. Nto ngathi uyatyholwa ezithengwe nabayimigulukudu ngemipu. Kwaye ngenyameko bakhalela uncedo. Ndiya unokuthelekelela uDavide kumqolomba, ukubila njengoko ethandaza lo mthandazo.
Ke uDavide ethandaza, eqonda ukuba uThixo umhlobo wakhe waza yena ukukhathalele. Ke ukuba inyaniso uqhuba indlela uyathandaza.
Uyazi uThixo uphulaphule. Jonga ivesi ezintandathu. Uthi, "Kubazele indlebe ukuhlahlamba kwam Ngokuba ndiswele kakhulu." Ngoku andiqondi ukuba oku kuye uzama ukweyisela bakaThixo ukuswitsha phezulu, eve utshintsho. UDavide uthi oku ngokuphindaphindiweyo kwiiNdumiso. Ndicinga ukuba uDavide uthi, "Ndiye Uthethe ukuphulaphula abantu bakho xa sithetha nawe. Ngoko undiva. Mna ndithetha. "Oku kungathi wa ngokucofa naye emagxeni. Kanye, "Nkosi, ukuphulaphula intanda yakho. Ndinento yokuthetha. "
UDavide wayesazi malunga irekhodi kaThixo lwengoma. Wayesazi ukuba uThixo wenza umnqophiso bantu. Wayesazi uThixo wathembisa ukuba nabo. Wayeyazi indlela uThixo wayiva imithandazo yabo ubanikele ngapha nangapha kwakhona. Kwaye kulindeleke ukuba lo uThixo wayeza kumva eli xesha kwakunye.
ngumKristu, musa uthandaza ngolu lwazi? Okanye ngaba nicinga ukuba kukho nje esithi amagama? Ngaba uyathandaza kunye nempatho injongo kaThixo nothando kuwe? Ingaba umthandazo intsebenziswano yokwenene noThixo okanye ngaba nje ukuphosa amazwi phezulu kwesilingi? Ngaba nje zithethe? Oku kubalulekile ukuba uThixo umhlobo okhathalele.
Sinako esinokuyifunda kwindlela uDavide ethandaza. UDavide okunene ibethwe izikhalazo zakhe kuThixo. Ngoku siyazi ukuba kwiZibhalo uThixo isiyalela ukuba abayaziyo kukukhalaza besola. Kodwa apha uDavide ubonisa indlela efanelekileyo ukuvakalisa izikhalazo zethu. Yena akayi abayaziyo kukukhalaza besola uThixo ngathi amaSirayeli entlango. Yena akayi Ndikhalaze ngendlela ubeka lemo kaThixo okanye isigwebo wathandabuza. Yena akayi kubeka uThixo ityala.
Okunene okwa-. Njengoko siza kubona kamva nakwiNdumiso uDavide ingqina ukulunga kukaThixo. Yinto KULUNGILE ukuvakalisa izikhalazo zakho kuThixo, kodwa bekwenza oko sinentembelo epheleleyo kuye. Yinto KULUNGILE ukuxelela uThixo wena ukuba xesha linzima. Kodwa xa siyimangalela ukuba sikweni - nokuba ngokuvakalayo okanye ezintliziyweni zethu - oko xa iba isono.
Kodwa umthandazo kunzima ukuqonda amaxesha. enye rapper, kwi ingoma ebizwa Molo Thixo, wathetha ngomthandazo enjengale.
"Ndicinga ukuba ixakeke ubambe umgca nceda / Biza ndiphambane Ndacinga mhlawumbi Wayenako lwengqondo ukufunda."
Yena sizisa esilungileyo. sele uThixo uyazi ukuba ucinga ntoni phambi umxelela. Ukuba uThixo wazi yonke, yintoni ingongoma Kunokumxelela? Ngaba kungumsebenzi nje ingqeqesho? Ikukhathaze xa amaKristu bethetha ngomthandazo ngokungathi njongo eziphambili ulungelelwaniso ukuthanda kwakho kunye kukaThixo. Oko akuyonyani.
Siyaxela yena kuye ngenxa uyasiva, Uvuyiswa lodaba kuthi, kwaye Yena ukukhathalele kwaye usoloko ephendula eluthandweni (engakumbi ukuba kamva). Kodwa nceda sixelele uThixo ezikuxhalabisayo. Abakhala kuye. Kuba isikhalazo sakho. Phakamisa ilizwi lakho. Funda uDavide apha.
Yena liqhubeke. Jonga oko akuthethayo kwivesi ezintathu.
Xa umoya wam utyhafe ngaphakathi kwam, ke nina nibaziyo indlela yam. Xa umendo apho ndihamba amadoda bandiqhushekele isibatha.
Naphi uDavide wayekhangele, USawule kuzifihla izirhintyelo kuye. Kabini wazama ukumbulala xa wayedlala uhadi kuye. Yena wabinza ngentshuntshe kuye waza wazama ndimqhame eludongeni. USawule wamnika ke intombi yakhe ngabom, ngokuba ngumgibe kuye. Wazama ukweyisela unyana wakhe, BFF kaDavide, ukumbulala. Ke kaloku uSawule nemikhosi yakhe ekumsukeleni. Kukho ingozi ngalo lonke ixesha.
Ndiyazi abanye sizive ngathi singazidibanisa kuDavide apha. Siziva nje kungakhathaliseki ukuba siya kubuya kukho inkathazo. Siziva ngathi ubomi bethu bonke aba ezingathethekiyo. Yiyo loo nto unxunguphale. Oku yindlela uDavide uvakalelwa.
Kodwa uye uthi xa umoya wakhe ityhafile, xa umoya wakhe atyhafileyo, xa yena va ndimangalisiwe, nguThixo owaziyo indlela yakhe. Yinto nguThixo owazi into kuqhubeka ngenxa.
Kwindinyana ezine uqhubeka xelela uThixo malunga kwenzekantoni.
Khangela ukuba ngasekunene kwam ubone; akukho bani ochaphazelekayo kum. Andinamntu yokusabela;Akukho uwukhathaleleyo umphefumlo wam.
d. Akukho One Kodwa uThixo
UDavide siyahlukana umfazi wakhe waza nesihlobo sakhe siyahlukana kangangoko, jonathan. Nguye okungamkelekanga ebukumkanini. Uvakalelwa ngathi akukho mntu ukukhathalele ngaye, ngathi akukho mntu ukumsindisa. Kodwa uhamba phambi koThixo. UDavide uyazi uThixo umhlobo wakhe ukuba uThixo uya kubanyamekela kuye.
Oko kwenza umahluko obakho xa abahlobo baye bazityeshela kuwe. Nosapho uye babengandithethisi ukuba. Kunye nentsebenziswano-abasebenzi abayikhathalele ngawe. Nabamelwane bakho nokuba uyazi ukuba ungubani. UThixo uyazi wena uThixo ukukhathalele. UThixo uyayiva imithandazo yakho. UThixo uyazi ukuba bangaphi Kwaneenwele ezi zentloko yenu. Uyazi intlungu nezidubedube wena ufumana. Yaye ngale ngqiqo, ikholwa in uYesu akazange yedwa.
Ngokufuthi sichitha ubomi bethu uzama asazi abanye abantu, engafuni ingqalelo kunye nentlonipho. Sifuna ukuba usikhathalele. uThixo usikhathalele! Akukho kwisiqithi ekude okanye abalahlwe isakhiwo apho ikholwa iya kuba yedwa. UThixo unawe. Kwaye uyakuthanda. Yaye usikhathalele.
nangako, ngaphandle uThixo umenze umhlobo wakho uya kushiywa. Bekuya kuba xi ukuba kule Ndumiso yaphela apha. Kwaye abaninzi izililo zehlabathi ziyaphela apho. Kodwa uDavide uyazi ukuba xa uziva ndedwa abaninzi bashiya, uThixo usikhathalele. Kwaye uyazi ukuba xa efuna umntu ukuze anyamekele yena, yena ndibaleka kuThixo.
Ngoko ke yonke into kufuneka kuThixo singafumana, naxa nto ezirhabaxa. Kodwa ngokuqinisekileyo uThixo umhlobo wethu sonke kufuneka.
II. UThixo Protection wethu Ngamaxesha Obunzima
Ndifuna ukuzisa ingqalelo kwinto enye ngaphezulu athi kwivesi ezine. Uthi, "Ndiya kuba yokusabela." Ke kaloku, xa sisiva yokusabela ilizwi, siya ngokuzenzekelayo siye kule ndlela busafobe. Sicinga ukuba uthetha ukuba akukho mntu ukuba babalekele. Yiloo nto ke ithetha ntoni apha. Uthetha andinamntu ekhaya. Andinamntu yokuhlala. Ndiya bengenandawo kulala. Mna ngokoqobo baboniswa ngokwasemzimbeni. Akazange abe checking in Motel 6. Yeyiphi le nto uye zimele emqolombeni.
Ngoko ke yonke into kufuneka kuThixo singafumana? Ngaba uThixo indlu kuthi? Jonga ivesi ezintlanu.
Ndiyazibika kuwe, Nkosi; ndithi, "Wena yokusabela kwam,Isabelo sam ezweni labahleliyo. "
Okokuqala awayeyithetha, Andinalo umhlobo, kodwa nguwe mhlobo wam. Andinalo nabani ukuphulaphula, kodwa uya kuzidla unokuphulaphula kum. Andinalo inyameko, kodwa uya kuzidla uzakundikhathalela. Ngoku nto esithi, Andinalo nayiphi yokuhlala, kodwa nguwe likhusi. Wena yokusabela kwam.
Ngokuya ndandisebenza kule ntshumayelo ngokwenene ndisile kule ndinyana. Ndandifuna ukuba ngaphezulu kuthi ngaphezu nenzwana yekofu ikomityi ivesi. Yintoni na le nto athetha ngayo ebomini?
Sabona olu lwimi yokusabela veki yokugqibela kwiNdumiso 141 kakhulu. Kwaye sibona zonke phezu iZibhalo. Uye wayengathi uThixo likhusi yakhe yokoqobo emzimbeni. Kodwa uthi phakathi yokuswela kwakhe ikhusi ngokwasemzimbeni, UThixo uhlobo olunye zezindlu kuye. UThixo ulihlathi wakhe.
Oku kuthetha ntoni ukuze uThixo abe ikhusi lakho? Ndicinga ukuba kuthetha yena ukhuseleko kwakho zonke izinto akoyikise ehlabathini ngaphandle. Nangona siye wenza amakhaya ethu zibe izulu zethu kancinane emhlabeni kunye tofo entertainments zonke iintlobo, ukhuselo oluphantse ngenjongo yokufihla. Yinto sizikhusele engozini kuthi - ukusuka imozulu, ngamasela, ukusuka abahlaseli.
Phulaphula oko uthi uDavide nakwenye iNdumiso wabhala ngoxa kumqolomba.
Yiba nenceba kum, Thixo, yiba netarhu kum, kuba kuwe umphefumlo wam esabela; esithunzini samaphiko akho Ndiya kuzimela,kude kudlule inkxwaleko. (iNdumiso 57:1)
UDavide uthi asuke abusithelise kuThixo. UThixo asikhusele kwintshabalalo. ngokukodwa, Uye uthi uThixo umphefumlo wakhe esabela. Ngelo inxalenye zinzulu ngubani na, kwindawo engundoqo yakhe, uzifumana yokusabela wakhe kuThixo.
Ngaba uThixo akho yokusabela namhlanje? Yintoni uthembele ukukukhusela? Yintoni ebomini bakho, ukuba xa usithi uyilahlile ubuya kuziva baboniswa neVulekileyo entshabalalweni? Ngaba imali yakho? Ingaba isimo sakho? ngcono noko, phi na ukuba ugidime ngamaxesha engxingongo? Phi uziva ukhuselekile? Ngaba ukuba ubudlelwane okanye loo msebenzi? Ukuba kunjalo, ngoko oko kubonakala ngathi UThixo ulihlathi wakho.
Ukwenza igwiba uThixo wakho Ukuma intliziyo. Yeyona trust nzulu ngoThixo njengokhuselo wethu. Loo nto esazi nokwazi ukuba uThixo ekhuselekileyo thina. UDavide uyazi ubomi bakhe busengozini, yaye nguye wabandezeleka, ukanti yena uziva ekhuselekile. Yintoni indawo engaqhelekanga ukuba, ukanti oku kulapho likholwa wonke kwihlabathi bewile kufuneka angazibona. Ndibandezelekile, noxolo. buhlungu, sekunjalo bevuya.
Ngoku mna esithi, ukuba ngenxa yokuba uThixo ukhuseleko lwethu, Akayi kuvumela ukuba ukuba sibafundise naziphi na izilingo? Hayi akunjalo. Khawucinge nje ngako oko ngolu hlobo.
Le wotshi ndiya enxibe namhlanje manzi. ngoku oko akuthethi ukuba ndihamba ngaphandle imvula okanye uliyeke ngoxa mna ukuhlamba izitya, ayiyi manzi. Yintoni oko kuthetha ukuba nokuba iwotshi iye yamanzi, awuyi kutshatyalaliswa. Oku kuyafana ukuba ikholwa. UThixo wathembisa ukuba awunakungavuyi sisaqhwithi kuthi, kodwa yena va wathembisa ukuba asiyi kutshatyalaliswa. ukufumana arhabaxa yinkanyamba, kodwa ngeke kutshatyalaliswa.
Ithetha ntoni le nto? KwabaseRoma 8 uqulunqa izinto ezininzi ezimbi esinokuyithelekelela kwenzeka ukuba kuthi, kubandakanywa ukufa. Kwaye ithi na phakathi kwazo zonke ezi zinto, siza soyise ngoKristu osithandayo. KwabaseRoma 8 Isixelela ukuba konke kuya kuphumela okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo, kwababiziweyo ngokwengqibo yakhe.
Ngoko khangela, njengoko ukhuseleko lwethu, UThixo wethu uya kusikhusela kuko konke oko kuya kuphumela ekupheleni senzane yethu okanye ukutshatyalaliswa. Kwaye kufanele kusithuthuzela. Kaloku siyazi ukuba uyawuyeka sibetha, ke ngenxa zethu ezintle uzuko lwakhe. Nguye ukhuseleko lwethu. Ngoko uDavide ezifana, "Ngubani ekufuneka yokuhlala ngokwasemzimbeni, xa uThixo!"UThixo imfuneko inkulu, kwaye xa imfuneko omnye uzalisekisiwe, bonke abanye khangela ezincinane kakhulu.
Ngoko kwakhona ndicela phi na ubaleke ngamaxesha ziinkathazo? Ndicela zombini amaKristu apha namhlanje kwi non-lamaKristu. Phi na ukuba ugidime? Abaninzi kuthi baye ebaleka izinto eziphosakeleyo. Siza zibalekela zokufihla zobuxoki. Kwaye unyaniseke, loo nto bubudenge. Kungakhathaliseki ukuba yintoni yokuba iindawo lobuxoki, nokuba loo nto ngumntu, nokuba likhoboka - oko kuyingozi. zokufihla lobuxoki amanga kuthi. Zibonakala ekhuselekileyo, kodwa ekugqibeleni kwabo asishiye kuphela izakubeka. Abayi kusikhusela kwintshabalalo kuthi.
Duteronomi, UMoses ithetha ukuba uThixo uza kuyiphendula izithixo abantu Wakhe.
Uya kwandula ke athi, “Baphi na kaloku oothixo babo [ethetha zezithixo zawo], Iliwa ababezimela… Mabasuke phezulu aze akuncede; zibe ukhuseleko kwakho.” (iDuteronomi 32:37)
abantu bakaThixo bahlaselwa zezinye iintlanga, kwaye oothixo bobuxoki baza babeka ithemba labo - namalengalenga abo bobuxoki - abazange bakwazi ukuzikhusela. Musa ukwenza impazamo yabo.
ngokunjalo, musa ukwenza impazamo yokucinga ukuba nje wenze igwiba uThixo wakho xa lixesha. Uya ulinde nje de kube kubi kwaye ke uya Ungangena uThixo. Loo nto yenza kungabikho ngengqiqo konke konke. Wena musani ukulinda de saqhwithi ukwakha indlu. Uhlala kwindlu, kwaye bakhuselwe xa uqala ukuna. Awunayo sakuphakuzela xa iqala drizzling, ngenxa yokuba sele efihliweyo wena kuye. Iqhosha lokulayita esonweni kwaye uthembele kuye, ukuba yayiza kumkhusela ingqumbo yakhe yobulungisa. Kwaye Uqhuba ubaleka kuye imihla ngemihla emva kosuku.
Ke kaloku njengoko sithetha ukhuseleko kaThixo, asikwazi singalibali ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo into amanwele kwenzeka Newtown, Connecticut. Omnye nomnye ukuhlaselwa bunzima kwi isikolo. Ukuba abantwana abaselula kakhulu ezihlanu abaneminyaka emithandathu. Oko kumele kunicaphukisa aze aphele ukuba. Neentlekele ezifana oku kwenza abantu ukubuza imibuzo.
ngumKristu, ntoni wena, ukuba kuthi ukuba umhlobo wakho emsebenzini othi, "Iphi uThixo wakho phakathi kwale? Kutheni na yena ukukhusela abo abantwana abamsulwa? Kwakutheni ukuze Yenze ukuba oko kwenzeke?"Yintoni nina nithi kuloo?
Yintoni ndithi? Ndicinga ndingathanda ndithi, andaz. Kutheni mna endaweni? andaz. Andifuni ukuba akunike eminye impendulo intanda malunga ingxaki yobubi. Akukho namnye ofuna ukuva ukuba. Ndicinga bendiya kuthi nje andazi kutheni, Ke mna ndiyazi ukuba uThixo. Kwaye Yena elungileyo. UThixo akandixelela ukuba zonke ichaza kutheni uvumela izinto ezithile, kodwa Yena Usixelele oko kufana. Siyazi ke ukuba kulungile, kwaye izilumko, nokugqibelela. Uye sele uzibonisile ukuba. Ngoko bonke ndinokuyenza uthembe, nibathandazele abo amaxhoba, kwaye ukhumbule ukuba akukho meko amanwele kangangokuba asikwazi ukubaleka kuThixo.
Kuba nkqu kwezona intliziyo ebuhlungu isithi iimeko, sinako yonke into uThixo sifumana. Nguye mhlobo wethu kunye nomkhuseli wethu, kodwa kukho ezininzi.
III. UThixo Ubuncwane wethu Ngamaxesha Obunzima
Ndiyazibika kuwe, Nkosi;
Ndithi, "Wena yokusabela kwam,Isabelo sam ezweni labahleliyo. "
UDavide ubiza isabelo sakhe uThixo. Le nxalenye gama lithetha isabelo. Ngoko oku kubhekisela isabelo sakho nelifa - isahlulo yakho oko wasala ngasemva. Oko kungathetha umvuzo ethile oko eyayilunge yeyakho. Ngoko kwimeko yakhe yangoku, UDavide nto. Nguye kude nekhaya lakhe hayi kwi sokuqa kulungile kukumkani.
Ngoko ke nto esithi, "Andiqondi ukuba inxalenye, ilifa, umvuzo. uThixo, wena umvuzo wam. Wena ebuncwaneni bam. Iyinto yam yonke!"Yaba yonke wakhe uThixo.
Umfazi wam mna ubukele le Umboniso ESPN kule veki ebizwa bazimpula. Bamaxwebhu wayeza iimbaleki abathi ngaxa lithile baba oosozigidi, kodwa bazifumanisa ngokupheleleyo waziqhekeza. Ezinye zezi guys ngokoqobo wenza amakhulu ezigidi, kodwa baqupha zonke izindlu, iimoto, iimpahla, kunye yokuphila eninzi. Babehlala ngathi izinto, eziphathekayo, phahla nobuncwane babo. Bakuba baphulukana zonke kuyo, babengazi ukuba yintoni ezakwenziwe. inxalenye yazo.
Ngoko kukho umfana njengoPawulos uMpostile. Owathi Filipi uthi uye wafunda ukuba umxholo, nokuba bazizityebi okanye nguye amahlwempu. Ngaba uyafuna ukwazi imfihlelo? Wayesazi ukuba bonke kwakufuneka ngokwenene ukuba uKristu. Zonke wayefuna ukuba uKristu. Wayekulungele uyilahle yonke kude ukuze abe uKristu. UThixo bubuncwane bakhe. Musa ufuna ukufumana kuloo ngongoma?
njengoko A.W. Tozer wayibeka kwincwadi yakhe ethi The Ukusukela kaThixo, "Le ndoda uThixo ngenxa ubuncwane bakhe zonke izinto One."
b. Luvuyo Ngokusekelwe Imali
Xa ukukhanya kwalo, awunakuba kwakuya kwi akhawunti yethu yebhanki uvuyo lwethu. uvuyo lwethu noxolo awukwazi ukuya, ndikuhambise siziva ezinzileyo ngayo imali, leyo ukuhendeka amaxesha. Sifuna uhlobo iliwa ukuzithemba oluqinileyo kuThixo, ukuba isebenza nzima ukuze, kodwa uyalithemba uThixo ngaphezu kwemali. Uyakwazi ndikholose imali, kodwa ukuba loo nto imbi. Akukho isixa semali, ukuba akanako ngumoya okanye ibiwe. Imali aziyi kuhlala, kodwa uThixo uya. Ifanele ubutyebi bethu, nokuba ngamaxesha engxingongo.
njani ukwenza umsebenzi wakho ngendlela yokuba kwizinto uThixo ngemali? Ngaba umnqweno wakho uze kufuna imali, wenze yokufuna kwenu kuThixo khangela iziqhwala elimfiliba? Ukuba kunjalo, LikaThixo ngokwenene bubuncwane. Ukuze ndingamboni njengomvuzo wakho wokwenene.
Ngoku uthi ukuba uThixo konke oko kufuneka na kuthi bonke ezinye iimfuno zethu shwaka ngokwenene. Kwaye oku umnxeba ukuba sityeshele zonke ezinye iimfuno zakho. Kodwa ke umnxeba ukuba sixhomekeke kakhulu kwi imfuno yakho inkulu.
c. Kwilizwe Living
Uphawula ukuba uDavide uthi uThixo sisabelo sakhe ezweni labaphilileyo. Uye wathi uThixo konke endinako konke ekufuneka mna kanye ngoku kobu bomi. Ngoko ke abazali bakhe esithi uThixo kuphela ubutyebi bakhe ubomi elilandelayo. Uye uthi ngoku, UThixo zonke kufuneka.
Ndiyazi kukho abanye bethu apha namhlanje abangenazo yonke into esifuna, kwaye mhlawumbi hayi yonke into esiyifunayo. Kodwa ukuba uThixo, bakhuthazwe. Badumise uThixo ukuba ufuna yakho inkulu sele wadibana kuKristu.
Naxa sivakalelwa ngathi siya oswele, sinako konke kufuneka kuKristu sifumana.
IV. UThixo uMhlanguli wethu Ngamaxesha Obunzima
eshukumayo Superhero na usebenziswano omkhulu ngoku. Yonke imihla khangela phezulu kukho bhanya superhero olutsha. Batman, superman, Indoda yesigcawu, Monkeyman ... ngokuzibona nje ukuba ningè ukunikela ingqalelo. Ke zikho ezinye iintlobo neemuvi amanyathelo ezifana Kucatshulwe kwaye James Bond. Sithanda ezi ndidi kweefilimu, kuba sisheke uzithandela ezinkulu kuno ubomi amaqhawe ungagcina imini xa ukhangela ukuzenzela. Kaloku uDavide usizobela umfanekiso efanayo apha kaThixo. Jonga ivesi ezintandathu.
Kubazele indlebe ukuhlahlamba kwam,Ngokuba ndiswele kakhulu;ndihlangule abandisukelayo, ngokuba bebomelele kunam.
b. kuloko kufuneka
David kwakhona uxelela uThixo avakalelwa ngayo. Nguye siswele. UDavide ekupheleni ngokwakhe. Akukho nto ukuba okanye nabani na esinokuyenza ukuze amsindise. Usengxakini. Kwaye kule inkathazo uya kuThixo. Kwakhona uDavide uyazi ngoThixo. Uyazi ukuba uThixo wenza engenakwenzeka. Yena Ebeza sele wambona uThixo benze engenakwenzeka ebomini bakhe kunye nabanye amadabi yena Ebeza walwa. Ukuba uThixo anganika weebhere, kunye iingxilimbela, nemikhosi esandleni sakhe, ngoko ngokuqinisekileyo unako ukumhlangula ukusuka komnye ukumkani self-yayingulo.
kodwa khangela, yokuba ningaceli into, ukuba awazi wena basweleyo. Unyana wam iyakhala ukutya, kuba uvakalelwa ngendlala kunye uyazi ukuba ufuna ukutya. UDavide uvakalelwa ukuba bafuna kwaye kukhokelela ukuba ikhale kuThixo. Uyazi ukuba abo babusukelayo kuye bomelele kunaye. Wayesazi ukuba nguThixo kuphela amkhulule kule meko ethile.
Kwaye qaphela ukuba abuze uDavide. UDavide akasiceli ngathi Umxholo kule uncedo. Kwindinyana omnye uthi yena va ecela "inceba." Uyayazi becela ukuba akayi ukufumana into emfaneleyo, kodwa endaweni into yena uyanqena: intlangulo. Kwaye yonke imithandazo yethu kufuneka ukuba mayifane. Ngokuzithoba uyayiqonda ukuba ube buthathaka kakhulu. Asazi bafanelwe nantoni. Kodwa siza sicela uThixo ahlangule inceba kuthi.
Ndidla ndizibuza ukuba ndikwazi ukunceda umhlobo ukuba kwimeko enjengale. cacileyo, Andifuni ukuba ukuthi nje, "UThixo Kwanele" kwaye ayijongele imeko yabo. Inye kuphela into ndiyazi ukuba uyenze kubanceda kuyokufikwa kwindawo apho uDavide. Njengoko ecaweni ndlela sikwazi ukukhonza omnye komnye ngamaxesha emaxongo. Bancede ukuya ekupheleni xa bayaqonda imfuno zabo yaye sithembele naYe. Thandaza kubo, yabathanda. Amaxesha amaninzi, yiloo sonke singenza.
c. Umthetho ukucela uncedo
Bekuya kuba bubudenge uDavide ukuqwalasela ebaleka kuye nabani na ongomnye, xa imeko ya ngokucacileyo wakhe, nabanye ukulawula. Kunjalo kuthi, ukanti thina silubaleke kwenye ngamanye. Kodwa usimema ukuba beze kuye.
…kubiza kum ngemini yokubandezelwa; Ndiya kukuhlangula wena, kwaye kuni aba uya kumzukisa. (iNdumiso 50:15)
UThixo utyhila ngokwakhe ngokuphindaphindiweyo eZibhalweni njenge mhlanguli. Njani ngento uThixo kuLwandle Olubomvu? Kuthekani ngobomi kaYosefu? Kuthekani madabi? Xa zonke ukhangela akunakwenzeka, UThixo osihlangulayo nangoku. Akukho lutshaba, ngubani na onokuma ngokusemthethweni naye. Wemikhosi kuwa phezu, iintaba kuqubuda, kunye imimoya namaza akratshayo ebukhweni Bakhe. Kwaye irekhodi yakhe kwengoma Iyamangalisa. Wada waya evuka ukuze asihlangule esonweni.
Umthandazo kule ndumiso, ndiyakhathazeka yaye singxamisekile, indikhumbuza ngomnye umthandazo eBhayibhileni. Inyaniso, umntu ethandaza sisihlobo kamva kakhulu umfo owathi wabhala kule Ndumiso. Oko kundikhumbuza umthandazo kaYesu eGadini eGetsemane. UYesu uyazi uzakuhamba emnqamlezweni. Uyacenga uThixo, yicawa, embuza ukuba kukho enye indlela. Ufuna sihlangulwe intlungu ukuba phambili kuye. ntlungu yakhe bunzulu kangangokuba sweated igazi.
UThixo akazange kubahlangula uYesu intlungu engathethekiyo nokubandezeleka yayiphambi kwakhe. Yaye uYesu akazange azame ukubaleka. Wayesazi oku yintoni Weza ukwenza. UYesu wafa emqamlezweni. Yaye xa uYesu waxhonywa kuloo mnqamlezo, Yena ukubandezeleka ukuze wena kum kwakuza kufuneka. Wayesela isohlwayo sezono ukuba akazange enze. Waphila ubomi obugqibeleleyo, wayengazange wamcaphukisa uThixo. Waye akaba njengoDavide, okanye, okanye mna. Sicela aboni abo Ndiye bekhubeka uThixo ongcwele. Yena ndingenguye umoni, wafa kunjalo ukufa umoni ngalaa emnqamlezweni. Yena owanikelwa ekufeni, ukuze zinokudluliselwa.
Kwaye isibizele, ukuba ndikuhlangule thina, kodwa sithembele le lukhona ababeze ukusenza. Asazi ukuba ukuphumelela kweli dabi, sibambelela nje kuLowo osele. Kukholwa kuye. uthembe. Nika ubomi bakho kuye.
Inyaniso, xa ungafumenanga ngokwenene ukholose kuKristu, UThixo akanguye umhlobo wakho ngamaxesha engxingongo. Uye akasithembisanga ukhuselo. Uye akasithembisanga ukuba bubuncwane okanye umsindisi wakho. AmaKristu maxa wambi yiloo, kodwa ibali yethu iphela ukuhlangulwa. Ngaba yeyakho?
e. Isizathu yokusindiswa
Undikhulule entolongweni yam,ukuze kubulela kwigama lakho. Aya kwandula ke amalungisa ndawonye ngam ngenxa yokulunga kwakho kum.
Apha wenza kucace ukuba kutheni ufuna kunikelwa, kutheni ufuna kukhululwa - ngokuba ufuna ukudumisa uThixo mhlanguli yakhe. Ubona oku elinye ithuba lokuba uThixo ukubonisa wazenza.
ngumKristu, njani ukuba xa uThixo ukugwebele? Ndiya unokucinga ezininzi, amaxesha amaninzi xa ndandiziva axinekileyo waza wambongoza uThixo ngenxa yenceba. Ndaziva ngathi ngokoqobo ekupheleni kwehlabathi. UThixo wawuphendula umthandazo wam. Kwaye ndaye ndivuya. Kwaye ngokupheleleyo bayilibala uThixo. Andizange Ndimdumise. Andizange imbeko kuye. Ndilibele ngaye. Kwaye nkqu bayilibala into Awayenzayo, kungabonakala akukholeleki.
Xa itakane kancinane, encumisayo kunyaka wam iKrismesi. Kwaye lokuzalwa kwam kule ixesha ngoko owodwa. Ngeli xesha ebomini awunayo kakhulu. Ufumene cheerios, ofumene naptime, kwaye onalo iKrismesi. Ndibone zizibhengezo ivili enkulu kumabonwakude yaye Ndandifana, "Ndiya ube nayo." Ndafumana ivili enkulu. Kwaye ndiyacinga ukuba mhlawumbi waxa iinyembezi zovuyo.
Kaloku akukho nto engaqhelekanga ukuba wacela ukuba iinyanga ngeenyanga, kodwa xa ndifika esikolweni kunye nabantu wandibuza ukuba ndifumene, Ndilibele ndizakuyichaphazela loo nto? Hayi wolunye nto, ukuba si no kucela uThixo ukuba abe nenceba kuthi, kodwa kamva iintsuku ukulibala ngokungathi loo nto ayizange yenzeke?
Simele senze nantoni na ukukhumbula inceba kaThixo nokulima iintliziyo nombulelo, ingaba loo nto journaling okanye ukuthandaza nabanye. Yenza nantoni na.
Ekupheleni ndumiso, UDavide uthi olilungisa kunye ndawonye ngaye. Lowo uthetha njengoko imncoma uThixo ngenxa yokulunga kwakhe, amanye amakholwa aya ampheleke. Le nto siyenza ngeCawa nobusuku njengoko sisabelana ezi izingqiniso ubabalo. Siva ukulunga kukaThixo siwubuthe thina hamba omnye komnye Mdumise kunye. Yintoni nomhlanguli olukhulu.
Akukho meko imasikizi kangangokuba uThixo akakwazi beninikela. Xa kungekho namnye unako kukuhlangula wena, UThixo umsindisi wakho. Yenza kuye.
Ndikhumbula xa itakane, ndicinga ukuba abazali bam nako ukusombulula yonke. Ngokwenene akazange msebenzi oko kwenzeke, UMama noTata zinokulungiswa ngayo. Bendingayi Ndiphuphe ukuya endlwini abamelwane ', okanye ngokutsalela isalamane. Nje waya uMama noTata, kuba ndi fumana. Ndandingazi ukuba, kodwa ndisazi ke mna.
Kufuneka olu hlobo lokholo njengomntwana. Uhlobo lokholo ukuba sijonge, kungakhathaliseki ukuba yintoni na ingxaki, Ndingaya uThixo ngoko kufuneka. Makhe sithandaze.
Kathy • UTshazimpuzi 16, 2016 ngexesha 6:28 mna • impendulo
Itshiwo kakuhle! Enkosi, ubhuti,